Soomaaliya iyo MAALINTA CARRUURTA ADDUUNKA 2017 | Baydhabo Online
Soomaaliya iyo MAALINTA CARRUURTA ADDUUNKA 2017
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay kula dabaaldegaysaa adduunka intiisa kale xuska Maalinta Carruurta ee Caalamiga ah. Waxaanu is xusuusineynaa in 20kii Nofeembar, 1989 Golaha Qaramada Midoobay ay ansixiyeen Heshiiska caalamiga ah ee Xuquuqda Carruurta (CRC) si ay u muujiyaan in dunidu ay aqbaleen in xuquuqda carruurta ay tahay xuquuqda bini’aadamka, Isla markaana ay xuquuqdoodu u qalanto in la difaaco oo ay kor u qaadaan dhammaan dawladaha adduunku.
Soomaliya waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyay ee saxiixay Heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta 9-kii Maajo, 2002. Bishii Janaayo, 2015, waddanka Soomaaliya wuxuu si rasmi ah u ansixiyay Heshiiska xuquuqda caruurta. Dawladda Soomaaliya waxaa waajib ku noqonaya iney diyaariso warbixinta hordhaca ah labo sano ka dib markii la ansixiyey Heshiiska Caalamiga ah ee xuuuqda caruurta.
Wasaarada Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha oo ah Wasaaradda mas’uulka ka ah xuquuqda caruurta, ayaa ka hawl gashay isku duwidda howlaha ay Hirgaliyeen wasaaradaha safka hore iyo ururrada bulshada rayidka ah ee heerarka Federaalka iyo dawlad goboleedyadaba ee khuseeya xuquuqda caruurta si looga helo macluumaad dhameystiran ee ku saabsan hirgalinta heshiiska xaquuqda caruurta oo lagu daro warbixinta horudhaca ee heshiika xuquuqda caruurta.
Carruurta, dadka da’da yar, waalidiinta iyo daryeelayaasha kale ee carruurta ayaa sidoo kale qayb ka ahaa hannaanka isku soo aruurinta warbiximaha ku aadan hirgalinta heshiiska, waxayna bixiyeen macluumaad qiimo sare u leh warbixinta. Hannaanka qoraalka warbixinta horudhaca ah ayaa billaabatay iyadoo la tixgalinayo daneeyayaasha oo idil ugu dambaystana loo gudbinayo warbixinta Guddiga QM ee Xuquuqda Carruurta.
Hannaanka qorista warbixinta waxay siinaysaa dhamaan caruurta Soomaalida ah, dadka da’da yar, dadka waaweyn iyo dhammaan dowladda in ay isku hawlaan sidii ay u hubin lahaayeen in ay carruurta Soomaaliya joogtaa awood u yeelato inay ku raaxeystaan xuquuqdooda sida ku cad Heshiiska xuquuqda caruurta. Waa hawl adag, laakiin si tartiib tartiib ah ayaan ku gaari karnaa tan.
Wasaaraddu waxay billowday talaabooyin ay ku soo bandhigayso, kuna hirgelinayso Heshiiska xuquuqda caruurta iyada oo la billaabay diyaarinta Sharciga Xuquuqda Carruurta (Child Rigts Act).
WHHXA waxaa ka go’an meelmarinta xuquuqda carruur kasta oo Soomaali ah, iyo in la hubiyo in ay gaaraan awoodooda buuxda mid waxbarasho, caafimaad, deegaan iyo bulsho intaba.
Waxaan ku dhiiragelinaynaa warbaahinta iyo daneeyayaasha kale in ay si joogta ah u booqdaan bogga warbaahinta bulshada ee WHHXA si ay ula socdaan wixii lagu soo cusbooneysiiyo wixii horumar ah ee ku saabsan horumarinta xuquuqda carruurta. Warbaahinta waa daneeyaha muhiimka ah ee nala wadaagay ka guul gaaridda geedisocodka hirgalinta Heshiiska xuquuqda caruurta.
Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay ugu baaqeysaa dhamaan qeybaha dowladda, bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga in loo midoobo hirgalinta heshiiska xuquuqda caruurta si ubadka soomaaliyeed berri ugu noolaadaan mustaqbal wanaagsan.